Catégorie : Lesona 12 : Mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahefana ao am-piangonana
MINO ISIKA ADVANTISTA MITANDRINA NY ANDRO FAHAFITO fa amin'ny finoana ny zavatra nataon'i Jesôsy ho an'ny olombelona rehetra irery ihany no amonjen'Andriamanitra antsika. Tsy mila fiangonana na vondrona mpitondra fivavahana isika mba hanome antsika ireo zavatra nataon'i Jesôsy ho antsika. Izay rehetra ilaintsika dia azontsika avy Aminy, Izy no Mpisoronabentsika ao amin'ny fitoerana masina ao an-danitra ao.
Marina fa tsy mila ny fiangonana isika hanome antsika izay zavatra nataon'i Jesôsy ho antsika, saingy Andriamanitra no nanao ny fiangonana. Naoriny teto an-tany izany mba hanampy antsika haneho ny drafi-pamonjeny amin'ny olona rehetra ary mba hiasa sy hitory ny Filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Noho izany dia zava-dehibe ny fiangonana satria manampy antsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mampitambatra antsika ho iray ny fiangonana, ary ampiraisin'i Jesôsy isika mba ho iray amin'ny fo sy ny saina ary amin'ny fahamarinana.
Amin'ity herinandro ity isika dia handinika momba ny maha-zava-dehibe ny fiangonana ho an'ny asa nanirahan'Andriamanitra ny mpanara-dia Azy. Hijery ihany koa isika ny fomba itondran'ny fiangonana firaisana eo amin'ny mpino rehetra.
Jesôsy lohan'ny fiangonana (Efes. 4:23-27)
Efa hitantsika tany amin'ny lesona teo aloha fa ny "tenan'olombelona" no sary an'ohatra entin'ny Baiboly maneho ny fiangonana. Ny fiangonana dia "tenan'i Jesôsy ary io sary io no inanampy antsika hahita ireo lafiny maro samihafa misy ao amin'ny fiangonana sy ny fifandraisan'i Jesôsy amin'ny olony. Miankina amin'i Jesôsy ny fiainan'ny fiangonana, Izy no "lohan'ny" fiangonana (Kol. 1:18; Efes. 1:22). Jesôsy no mamelona ny fiangonana, tsy misy ny fiangonana raha tsy eo Izy.
Jesôsy ihany koa no iaingan'ny maha-izy ny fiangonana, izany hoe ny maha-antsika antsika, dia ny fahafantarana hoe iza moa isika amin'ny maha-fiangonana isika. Ny fahamarinana sy ireo fampianarana ao amin'ny fiangonana dia avy amin'i Jesôsy , kanefa mihoatra noho ny fampianarana no omen'ny fiangonana. Iza ary inona no mamaritra ny atao hoe fiangonana? Ny valiny dia Jesôsy sy ny Baiboly. Noho izany dia afaka mianatra misimisy kokoa momba ny fiangonana sy ny heviny isika araka ny voalazan'i Jesôsy sy ny Baiboly.
Miresaka momba ny fifandraisan'i Jesôsy sy ny fiangonany i Paoly ao amin'ny Efes. 5:23-27. Ampiasainy io fifandraisana io mba hanehoana ny tokony ho fifankatiavan'ny mpivady. lnona no ambaran'i Paoly momba ny fifandraisan'i Jesôsy sy ny fiangonana ary ny faniriany hanana fifandraisana ety dia ety amin'ny mpanara-dia Azy?
Mila manaiky ny fitondran'i Jesôsy ny fiainantsika isika. Mety hisy olona tsy hanaiky hofehezina, satria tsy ankasitrahany ny fomban'ny mpitarika sasany tany aloha. Tsy nampiasa, ny fahefany araka ny tokony ho izy angamba izany mpitarika izany, saingy i Jesôsy kosa no mitondra ny fiangonana, Izay tia sady tena Mpitarika azy. An'i Jesôsy irery ihany ny fahatokiantsika. Nomen'Andriamanitra fahefana ny fiangonana saingy i Jesôsy no tsy maintsy mifehy mandrakariva izany fahefana izany.
"Mitsangana eo amin'i Kristy amin'ny maha-lohany Azy izy. Tsy tokony hiankina amin'olona izy, na hofehezin'olona. Betsaka no milaza fa ny toerana ambony misy azy ao am-piangonana dia manome azy fahefana handidy ny olona ny amin'izay hinoany sy hataony. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fIhamboana toy izany. Hoy ny Mpamonjy: `Mpirahalahy avokoa hianareo rehetra'. Samy iharan'ny fakam-panahy avokoa, ary samy mety ho diso. Tsy afaka hiankina amin'ny olona voafetra isika hitarika antsika. Ny vatolampin'ny finoana no fanatrehana velon'i Kristy ao amin'ny fiangonana. Tokony hiankina amin'izany ny malemy indrindra ary izay mihevitra ny tenany ho matanjaka indrindra dia ho hita fa matemy indrindra, raha tsy manao an'i Kristy ho fahombiazany"— IFM, t. 444.
Mpitarika manompo (Mat. 20:25,28)
Tsy isalasalana fa nalahelo tokoa i Jesosy fony Izy teto an-tany raha nahita ireo mpanara-dia Azy nitady fahefana. Naniry ny ho tonga manam-pahefana ambony tao amin'ny fanjakan'i Jesôsy mantsy izy ireo (Mar. 9:33,34; Lio. 9:46). Tamin'ilay fotoana fisakafoana hariva farany niarahan'ny mpianatr'i Jesôsy dia maro tamin'izy ireo no naniry hifehy ny namany sy ho tonga lohany (Lio. 22:24).
Nanambara ny heviny i Jesôsy mikasika ny tokony ho toetry ny mpitondra manoloana ny vahoaka entiny. inona no fitsipika manan-danja hita ao amin'ny Mat. 20:25-28 izay nolazain'i Jesosy momba ny mpitarika tsara? Ahoana no hampiharantsika io fitsipika lo eo amin'ny fiainantsika? Ahoana no hanajantsika izany ao amin'ny fiangonantsika?
"Ao amin'ireo andininy ireo i Jesôsy dia mampiseho fahefana karazany roa. Raha ny ohatry ny fahefana ramanina, dia afaka manao fanamparam-pahefana amin'ny olona rehetra ny mpanapaka. Mitaky ny hanarahan'ny olona rehetra izay tiany hatao izy. Miharihary fa tsy nankasitrahan'i Jesôsy io karazam-pahefana iray io. Hoy izy tamin'ny mpianany: 'Fa tsy mba toy izany aminareo.' Nampiseho ohatra vaovao tokony harahina momba ny fahefana Izy, ka samy hafa tanteraka amin'izay fahitan'ny mpianatra mahazatra izany" — SLJAGC, t. 18 (nasiam-panamboarana).
Ao amin'ny tantara mikasika ny fomba tokony hampiasana ny fahefana, dia nampiasa teny Grika roa i Jesôsy : "diakonos", izay midika hoe "mpanompo", sy "doulos", izay midika hoe "andevo". Amin'ny dikan-teny sasany amin'ny Baiboly, ny "diakonos" dia nosoratana hoe "mpitarika" (Mat. 20:26); ny "doulos" kosa: "mpanompo" na "andevo" (Mat. 20:26, 27). Raha ireo fomba fanoratana ireo, dia thy voalaza tsara ny tena heviny. Tsy maniry ny hanafoana ny fahefana rehetra tsy akory i Jesôsy . Tsy izany fa to hanazava amin'ny fiangonana Izy fa ny mpitondra dia tsy maintsy ho mpanompo sy andevon.'ny vahoakan'Andriarnanitra aloha. Tsy azony atao ny miezaka hifehy ny vahoakan'Andriamanitra na manao didiko fe lehibe, tsy azony atao ny maniry ny hanan-daza sy ho lehibe eo imason'ny hafa. "Fanjakana miorina amin'ny foto-kevitra hafa no natsangan'i Kristy. Niantso ny olona Izy, tsy handray fahefana, fa hanompo, ka ny mahery hitondra ny fahosan'ny malemy" IFM, t. 585.
Mitahiry ny firaisan'ny fiangonana (2 Tim. 2:15)
Ao amin'ny 2 Tim. 2:15 sy Tit. 1:9 dia manoro hevitra an'i Timoty sy Titosy i Paoly ny amin'ny tokony hataon'ny mpitarika. Inona no ambaran'i Paoly mikasika ny mpitarika mahatoky sy ny asany?
Raha mahatsikaritra isika dia mahatsapa i Paoly fa mila miaro ny fampianarana sy ny foto-pinoan'ny fiangonana isika. Zava-dehibe ho an'ny firaisantsika tokoa mantsy izany. Mampiray antsika ho fiangonana iray ny fampianarantsika. Vondron'olona maro isan-karazany no mandrafitra ny fiangonana, noho izany dia mila mitady zavatra hiraisana isika ka hahatonga antsika ho iray ao amin'i Jesôsy. Avy amin'ny fahamarinana izay nomen'i Jesôsy ny fiangonana no hananantsika firaisana. Inona moa no mitranga raha tsy mifanaraka ny fampianarantsika? Hiady tokoa isika ary hisara-bazana, ka hiharatsy hatrany ny toe-javatra arakaraka ny maha-akaiky ny farany.
"Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesôsy, Izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany, no ananarako anao mafy: mitoria ny teny, mazotoa, na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin'ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany; ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano." - 2 Tim. 4:1-4.
Ireo teny ireo dia torohevitra avy amin'i Paoly ho an'i Timoty momba izay tokony hataony mba ho vonona amin'ny fiverenan'i Jesôsy. Nampitandrina i Paoly fa ho maro tokoa ny fampianaran-diso any am-parany any. Noho izany dia tokony hitory ny fahamarinana i Timoty, izany no asa nanirahan'Andriamanitra.
Ao anatin'izany asa izany dia tokony hiantso, hampianatra ary hampahery ny mpino i Timoty. Izany rahateo no lalana itarihan'ny Baiboly antsika (2 Tim. 3:16). Mila manaraka ny fahamarinan'ny Baiboly i Timoty ary avy eo hampianatra izany amin'ny olon-kafa. Tsy maintsy manam-paharetana izy sady maneho fitiavana amin'ny olona rehefa manao izany asa izany. Matetika ny fanamelohantsika ny mpanota dia tsy mitaona azy velively ho eo amin'i Jesôsy. Amin'ny fanampian'ny Fanahy Masina dia hampitambatra ny fiangonana ho iray ao amin'i Jesosy ny asan'i Timoty.
Mila manitsy ny mambra ny mpitarika (Mat 16:19)
Iray amin'ireo asa lehibe tsy maintsy sahanin'ny mpitarika ny mampianatra ny mpino hanao ny marina sy hanafay ny fitondran-tena tsy mendrika. Mila mitandrina tsara isika rehefa miresaka momba io lohahevitra lehibe io satria mety ho diso fandray mora foana ny mambra. Io asa fampianarana sy famaizana io, izay manan-danja tokoa, dia manampy ny fiangonana hihazona ny firaisany.
Araka ny efa nianarantsika dia fifanarahana ara-tsaina, ara-panahy, ary ara-pahamarinana ao amin'ny Baiboly no atao hoe firaisana. Mampiseho amintsika ny Baiboly fa noho ireto antony roa lehibe ireto no hampianaran'ny mpitarika ny mambra sy hanafaizany azy: (1) hiarovana ny fahamarinana sy (2) hiarovana ny fiangonana.
Araka ny efa hitantsika, ireo mpanoratra ny TV dia miresaka momba ny maha-zava-dehibe indrindra ny fiarovana ny fampianarana ara-Baiboly ataontsika isaky ny mamely ny fahamarinana ny fampianaran-diso. Zava-dehibe ihany koa ny miaro ny fiangonana amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, ny tsy fahatokiana sy ny fahavetavetana izay fandikana ny didin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra antsika ny Baiboly mba hiarovana amin'ny fampianaran-diso sy ny fitondran-tena tsy mendrika, izany no antony ilazan'i Paoly fa ny Baiboly dia "mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana" - 2 Tim. 3:16.
Ao amin'ny Mat. 16:19 sy Mat. 18:15-20 dia manome fitsipika manan-danja maromaro ho an'ny fiangonana i Jesôsy. Natao harahin'ny fiangonana izany rehefa tsy maintsy hampihatra famaizana amin'ny mambra izy noho ny ratsy nataony. Inona ireo fitsipika ireo?
Manohana ny famaizana ny Baiboly rehefa ilaina izany. Manambara ihany koa ny Baiboly fa isika dia tompon'andraikitra amintsika samy isika eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Midika izany fa tokony hisafidy ny hanao ny marina isika ary hiaina amim-pahamasinana. Fantatsika fa misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny hafa ny fitondran-tenantsika. Inona no tsy mampitovy ny fiangonana amin'ireo fikambanana hafa eto amin'izao tontolo izao? Miavaka ireo mambran'ny fiangonana noho ny tsy fitovian'ny fomba fiainany amin'ny an'ireo izay tsy mahalala na mankato an'Andriamanitra; samy hafa amin'ny fiainan'ny hafa ny fiainan'ny Kristianina. Mahita ohatra maro isika ao amin'ny TV izay mampiseho ny fomba tsy maintsy nanitsian'ny fiangonana ny fahotana sy ny fitondran-tena tsy mendrika teo aminy. Tokony hanaja ny lalan'Andriamanitra mandrakariva isika ao am-piangonana.
Ny Mat. 7:1-5 sy ny Gal. 6:1,2 dia miresaka momba ireo fitsipika manan-danja izay tokony harahintsika rehefa miezaka hamaha ireo olana saro-bahana ao am-piangonana isika. Inona avy izy ireo?
Ny asa ataontsika ho an'Andriamanitra ankehitriny (Mat. 28:18-20)
Ny lesona mandritra ity telovolana ity dia namerimberina matetika fa i Jesôsy no nanao ny fiangonana sy nampitambatra antsika ho iray ao Aminy mba hanao ny asany. Isika dia tsy fikambanana ho an'ireo izay to hifampiresadresaka fotsiny momba ny fahamarinana izay lalaintsika (na dia zava-dehibe tokony hatao koa aza izany). Ny tena antony nampiraisan'Andriamanitra antsika ho fiangonana dia ny mba hitoriantsika amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ny fahamarinana momba ny andro farany.
Ao amin'ny Mat. 28:18-20 i Jesôsy dia nandidy ny mpianany mba hanohy ny asany eto amin'izao tontolo izao. Inona avy ireo teny manan-danja ao amin'ny baiko nomen'i Jesôsy? Milaza Inona amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao izany?
Misy voambolana efatra manan-danja ao amin'ilay baiko nomen'i Jesôsy ny mpianany :
(2) ataovy mpianatra,
(3) manao batisa, ary
Amin'ny teny grika dia ity no voambolana manan-danja indrindra: "ataovy mpianatra"; ireo teny telo hafa kosa dia milaza ny fomba hanatanterahana ilay baiko hoe: "ataovy mpianatra". Manao mpianatra vaovao isika rehefa mandeha any amin'ny firenena rehetra sy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ka mitory ny Filazantsara amin'izy ireo, manao batisa azy, ary mampianatra azy hanatanteraka izay rehetra nandidian'i Jesôsy .
Manitatra ny fanjakan'Andriamanitra isika rehefa manao ny asany. Mihamaro hatrany ireo olona avy any amin'ny vazan-tany rehetra izay manaiky an'i Jesôsy ho Mpamonjiny. Manaiky ilay didin'i Jesôsy hanaovana batisa azy izy ireo sady manaraka ny fampianarany. Azon'ireo mpianatr’i Jesôsy vaovao antoka fa miaraka aminy isan'andro Izy amin'ny fahazoana mpianatra vaovao ho Azy. Nomena toky mantsy izy ireo fa homba azy i Jesôsy ary Andriamanitra mihitsy koa. Ny bokin'i Matio dia manomboka amin'ny filazana fa ny fahaterahan'i Jesôsy dia midika hoe: "`amintsika Andriamanitra" - Mat. 1:23. Ny teny fikasana nomen'i Jesôsy ny mpianany kosa, izay manambara fa homba azy ireo mandrakariva Izy ambara-pahatonga ny fotoana hiverenany indray, no mamarana io boky io.
"Tsy nilaza tamin'ny mpianany tsy akory Kristy fa ho mora ny asany (...) tsy avela hiady irery anefa izy. Nanome toky Izy fa hiaraka aminy; ary raha handeha amin'ny finoana izy, dia handroso eo ambanireny ampingan'ny Tsitoha. Nibaiko azy hahery sy hatanjaka Izy; satria Ilay mahery noho ny anjely, dia nay Mpirtarika ny tafiky ny lanitra, no iray laharana aminy. Nomaniny izay rehetra ilaina hanohizana ny asan'izy ireo ka noraisiny ho andraikitra ny hahombiazan'izany. Raha mbola nankato ny teniny izy, ka miasa mifandray Aminy, dia tsy ho diso" — VM, t. 28.
Vakio ny lahatsoratr'i Ellen G. White, "Individual Responsibility and Christian Unity," tt. 485-505, ao amin'ny Testimonies to Ministers and Gospel Workers: "Unité dans la diversité," tt. 471-473, sy "Discipline ecclesiastique," tt. 498-503, ao amin'ny Le ministere Evangelique.
Vakio ihany koa: "Church," tt. 707-710, sy "Church Organization," tt. 712-714, ao amin'ny The Ellen G. White Encyclopedia.
"Mila manao mihoatra noho ny ataon'ny mpitarika mahazatra ny mpitarika ao am-piangonana. Tsy maintsy mpanompo koa izy. "Kanefa ahoana no ahafahan'ny olona fray mitarika sady manompo? Olona hajain'ny hafa ny mpitarika. Olona mandidy sy manapaka ny hafa ihany koa izy ary miandry mba harahina izay lazainy. Sa tsy marina izany? Koa ahoana no ahafahan'ny mpitarika manompo ka manaraka baiko?" "Raha to hamaha izany olona izany isika dia tsy maintsy mijery an'i Jesôsy . Nampiseho fitsipika lehibe tamintsika Izy. Mpitarika izay manompo ny hafa no nisehoany tamintsika. Nandritra ny fiainany manontolo no nanaovany izany. Jesôsy ihany koa anefa no Mpitarika tsara indrindra izay tsy mbola hitan'ny olona teto ambonin'ity tany ity hatramin'izay." — OCT, t. 106, nasiam-panamboarana.
1- Diniho akaiky ny amin'ilay hevitra hoe: mpitarika manompo. Iza no ohatra tsara indrindra maneho izany eo amin'ny tantara na eo amin'izao tontolo izao ankehitriny?
2- Vakio indray ny Mat. 20:25-28. Milaza inona ireo andininy ireo momba ny fandraisan'Andriamanitra ilay teny hoe: "Iehibe" (Mat. 20:26) na "ambony" (Mat. 20:27)?
3-!ray amin'ny asa tsy maintsy ataon'ny mpitarika fiangonana ny miaro ny filaminana sy ny fifanarahan-tsaina ao am-piangonana. Inona no tokony hataontsika rehefa manao fahadisoana, na tsy mahomby, na koa tsy manome ohatra tsara ny mpitarika antsika?
4- Nahoana no zava-dehibe ny fanehoana famindrampo sy fitiavana amin'ny olona rehefa tsy maintsy hanome famaizana azy ireny isika noho ny tsy mety nataony?